Mayelana NATHI - BAOTE INDUSTRIAL MANUFACTURING CO., LTD
IBAOTE INDUSTRIAL GROUPelise "enhlonhlweni" enhle eQingdao City of China kuyinto ibhizinisi kazwelonke entsha futhi hi-tech ukuthi ngofuzo isiko futhi uphishekela emisha. I-BAOTE Group inamagatsha amancane amathathu agxile kulayini webhizinisi ohlukile.
Okokuqala imikhiqizo yensimbi--- Zonke izinhlobo zebhawodi ejwayelekile futhi engamile, amantongomane, isher flat, izikulufu nemigqomo yensimbi emoshayo, isitsha sensimbi esisezingeni le-BAOTE Industrial Manufacturing Co, LTD
Okwesibili izikhwama zepulasitiki--- Zonke izinhlobo zokweqa isikhwama, isikhwama sikakhonkolo sokuwasha ipompo, isikhwama sokukhishwa kwe-asbestosi, kk isikhwama esikhulu Konke kukhiqizwe nguMholi Weqiniso wePlastiki.
Okwesithathu yiQingdao Rainbow Tech Co., Ltd, okuyi-Precast Concrete ipayipi imishini nomhlinzeki wemishini yePlastiki. Lo mkhiqizo ufaka phakathi umshini wokwenza ipayipi odlidlizelayo we-Concrete ngo-2005 futhi wathuthukisa ngempumelelo umshini wepayipi wokuqala we-radial extrusion extrusion ngonyaka ka-2012.
Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu futhi wakhe ubuhlobo besikhathi eside nawe.
Hlonipha amakhasimende ethu ngensizakalo ehamba phambili, intengo yokuncintisana, nekhwalithi eqinile.
Isiko eliyinhloko lenkampani
Umbono webhizinisi: ukuvuselela imboni kazwelonke nokwakha umkhiqizo owaziwa umhlaba wonke.
Inhloso yebhizinisi: Nikeza abasebenzisi isakhiwo seKhabhinethi kagesi nesistimu yokulawula ephelele kunazo zonke izikhathi.
Amanani ezinkampani: ukufeza amakhasimende, ukudala inani, nokungeza ubukhazikhazi emhlabeni.
Isitayela sebhizinisi: ukuvumelana, ubuqotho, ukusebenza kahle kanye nokwenza izinto ezintsha.
1. Isu lokusebenzisana: ubuchwepheshe besimanjemanje, ukwehluka kwemakethe, ukukhiqizwa okuningiliziwe, nokuphathwa kwesayensi.
Isimiso sokuqashwa: umlingiswa kuqala, ikhono lesibili.
Ifilosofi yokuphatha: okugxile kubantu, ukunamathela ezimisweni.
Ifilosofi Yemakethe: Ayikho imakethe engenakufakwa, futhi akukho khasimende elingakwazi ukwaziswa.
Inkampani ihlale inaka ukutshalwa kwezimali kwezobuchwepheshe namathalente, inaka kakhulu izidingo zamakhasimende, futhi iqinisekisa ukucwaninga nokuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha ngamandla obuchwepheshe aqinile. Zonke izinkomba zemikhiqizo ekhiqizwayo ziyahlangabezana noma zeqe izidingo zobuchwepheshe zenjini enkulu futhi zaphasa amazinga afanele kazwelonke. Ukuhlolwa kobungcweti nokwamukelwa komnyango onegunya kuzuze idumela elihle ezimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Le nkampani ikholelwa emfundisweni ethi "ikhasimende kuqala, ikhwalithi egxile", nenqubomgomo yekhwalithi "yokuwina ngekhwalithi, ukulwela ukuphelela", futhi ihlela ukukhiqizwa nokusebenza ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso zohlelo lokuphathwa kwekhwalithi kanye nemithetho efanele kazwelonke futhi imithethonqubo. Insizakalo yokubuyisela kumakhasimende nasemphakathini.
Isakhiwo Bolts, Ama-Lag Bolts, Izinqola Zokuhamba, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, U Bolts, I-Hex Bolts,